Somali News Tv » Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad Oo sheegay In si Xun Loola Dhaqmay
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah Xildhibaanada golaha Shacabka ayaa sheegay in ciidamo katirsan booliiska Soomaaliya ay saakay rasaas ku rideen una diideen in uu laamiga maro
Waxa uu sheegay Xildhibaanka in ciidamada amaanka isku sheegay in uu yahay Xildhibaan u socda xaruntiisa shaqada balse laga diiday laguna amray in uu dib uga laabto laamiga Soobe uu xiligaasi marayay
diideen in uu laamiga maro
Mahad Salaax ayaa qoraalkan uga waramay sida saakay loola dhaqmay
Sharaf iyo karaamo ayaan u haynaa ciidamada qalabka sida, lkn waa in ay dhowraan xorriyada isku socodka shacabka ah iyo xasaanada dadka mas’uuliyiinta ah
Saakay 10:00 subaxnimo aniga oo u socda xarunta Golaha Shacabka ayaa ISGOYSKA SOOBE waxaa nagu celiyay ciidamo Boolis ah oo wadadu u xirneed. Kadibna waxay amar nagu siiyeen inaan KALA WAREEGNO (laabano). Waxaan u sheegay inaan Xildhibaan ahay, una socdo xarunteyda shaqo ee Golaha Shacabka. Waxayna nagu dhaheen amar ayaan qabnaa oo kuma sii daynayno. Waxaan ka codsaday in ay noogu yeeraan taliyehooda. Wuxuuna ii sheegay askarigii ila hadlayay in uu isagu meeshaan taliye ka yahay, amarna uu qabo uusana na sii daynayn
Kadibna qori ayuu inta nagu qabtay amar ku bixiyay inaan kala wareegno. Ciidamo ilaalo ah oo ila socday ayaa dagay oo ku yiri qof mas’uul ah ayaan wadnaa ee qoriga naga leexiya. Kadibna waxay bilaabeen ciidankii ila socday in ay qoryaha kula dhagaan
Gaariga ayaan kasoo dagay waxaanan ka codsaday in qoryaha askarta ay ka fuqaan iina ogolaadaan inaan la hadlo taliyehooda. Kadibna xabado ayaa nalugu
riday. Mudo kadib ayaa waxaa noo yimid saraakiil boolis ah waxayna balan qaadeen in ay tilaabo ka qaadi doonaan askartii falkaan ka mas’uulka ahaa
Golaha Shacabka ayaa gudi usaaray mudo 48 saacadood ah in ay jawaab uga keenaan arintaan iyo arimo kale oo dhowr jeer soo laablaabtay oo lagula kacay Xildhibaanada